Ndị na-enye anyị - Ngụgụ nke Alaeze ahụ
Gaa na weebụsaịtị Christine
Christine Watkins, MTS, LCSW, bụ onye ama ama n’ikwu okwu Katọlik na onye edemede, ya na di ya na ụmụ nwoke atọ bi na California. N'oge gara aga, onye na-ekweghị na Chineke bụ onye ekweghị na Chineke ma bie ndụ nke mmehie, ọ bidoro ndụ ndị ọrụ na Churchka Katọlik mgbe ọ gbasasịrị ọrụ ebube site n'aka Jizọs site na Meri, nke zọpụtara ya n'ọnwụ. Tupu nchighari ya, ya na ndi San Francisco Ballet gbara egwuri egwu. Taa, o nwere afọ iri abụọ nke ahụmịja dị ka onye ọkà okwu Katọlik, onye isi azụ na onye isi parish, onye nduzi mmụọ, na onye ndụmọdụ, ya na afọ iri dịka onye nlekọta na-ahụ maka iru uju na iri dịka onye ntụzi ọgwụgwọ na-agwọ afọ ime. Watkins nwetara akara ugo mmụta Masters ya na Mahadum Social na Mahadum California na Berkeley, yana ndị nna ya na Theology Studies site na Jesuit School of Theology na Berkeley. Ndị Watkins na-akwado ihe ngosi a "Chọta Ihe Ọzọ, Chọta Homezọ Gị Homezọ Gị," na Redio Maria, ma mepụta ma gosizie ihe ngosi nke ya na Shalom World Television. Ọ bụ onye isi na onye nchoputa nke www.edemere.og na ode akwụkwọ Amazon # 1 kasị ere ahịa: NIILE NA MARA; Otu nwoke isii si merie nnukwu agha nke ndu ha, TRANSFIGURED: riczọ Mgbapụta Patricia Sandoval site na Ọgwụ, enweghị ebe obibi, na azụ ụzọ nke Parentzụ Maka Planzụ Ebere, na Spanish kwa n'okpuru aha, TRANSIGURADA, NKPURU NIILE: Ebube di ebube banyere oria na ntughari site na arịrịọ nke Meri, MARYLE MANTLE M MAKA: Mgbapu Ime mmụọ maka Enyemaka Eluigwe ya na soro ya AKW JournalKWỌ EGO MARY, na WARMAKA: Àmà na amụma nke ọkụ nke akọ na uche. Lee www.edemede.christineWatkins.com, na iji nwetakwuo ihe ọmụma banyere akwụkwọ Christine dị n'okpuru, pịa ebe a.
Gaa na weebụsaịtị Weebụ Mark
Mark Mallett bụ ụlọ ọrụ Katọlik - onye Katọlik na onye bụbu onye mmeri nke na-enweta ihe nkiri telivishọn. N'afọ 1993, ezigbo ezigbo enyi ya kpọrọ ya oku ka ha bịa baptizim na Baptist. Mgbe Mark na nwunye ya Lea rutere, ihe a niile tiri ha ihe ozugbo -eto eto ndị di na nwunye na obiọma ha. N'ime ọrụ, egwu ahụ mara mma ma mara mma; Okwuchukwu, e tere mmanụ, nke dabara adaba, ma gbanye mkpọrọgwụ n'ime Okwu Chineke. Mgbe ha risịrị ozi ahụ, ọtụtụ di na nwunye bịakwutere ha ọzọ. "Anyị chọrọ ịkpọbata gị n'ọmụmụ Bible anyị echi nke abalị… na Tuesday, anyị nwere ndị di na nwunye n'abalị… na Wednesde, anyị na-enwe egwuregwu basketball ezinụlọ na mgbatị ahụ… Na Tọzdee bụ otuto anyị na mgbede ofufe… Na Fraịdee bụ… . ” Ka Mark na-ege ntị, ọ ghọtara na nke a n'ezie bụ Ndị otu obodo, abụghị naanị aha — ọbụghị naanị otu elekere na Sọnde.
Mgbe ọ laghachiri n'ụgbọala ha, Mark anọrọ ebe ahụ na-agbachi nkịtị. "Anyị chọrọ nke a," ọ si nwunye ya. "Ihe mbu Chọọchị mbu mere bụ obodo etinyere na parish anyị bụ ihe ọ bụla mana. Na ee, anyị nwere Oriri Nsọ ... mana anyị abụghị naanị mmụọ ma nke anyị -elekọta mmadụ ndi mmadu. Anyi choro aru nke Kraist n’ime obodo! E kwuwerị, Jizọs ó kwughị, 'Ebe mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ zukọtara n'aha M, m nọ n'etiti ha? ' Na 'Ọ bụ otú a ka mmadụ niile ga-esi mara na unu bụ ndị na-eso ụzọ m, ọ bụrụ na unu enwerịrị ịhụnanya maka ibe unu? ' N'ịbụ onye nwere nnukwu nsogbu na ọgba aghara, Mark gbakwụnyere, "Ma eleghị anya, anyị kwesịrị ịmalite ịbịa ebe a… ma gaa Mass n'ụbọchị ọzọ."
N'abalị ahụ ka ọ na-egbu eze ezé, na-echebara ihe ndị mere eme nke ụbọchị ahụ, Mak nụrụ olu pụrụ iche n'ime obi ya:
Nọrọ, nwuo dị ka ụmụnne gị.
Ọ kwụsịrị, legide anya, ma gee ntị. Olu kwughachiri:
Mgbe izu abụọ gachara, Mark nọ ọdụ n'oche na-ele anya Sweetlọ Ezigbo Rome -Akaebe nke Dr. Scott Hahn banyere otu o siri bibie nkuzi Katọlik… mana mechara bụrụ onye Katọlik. Ka ọ na-erule ngwụcha vidiyo ahụ, anya mmiri gbara Mark mmiri n'ihu ọ maara na ya onwe ya kwa nọ n'ụlọ. N'ime afọ ole na ole sochirinụ, Mark mikpuru onwe ya na mgbaghara mmehie Katọlik, na-ahụkwa nwunye ọzọ n'anya, mgbe ọ na-erube isi n'okwu ọzọ bịara otu afọ mgbe nke ahụ gasịrị: "Egwu bu uzo uzo izi ozi ọma." Nke a malitere ozi egwu Mark.
Mgbe ọ nọ na Youthbọchị Ndị Ntorobịa inwa na Toronto, Canada na 2002, ebe Mark na-abụ abụ, Pope St. John Paul II kpọrọ ndị ntorobịa ahụ ka ha buru amụma amụma:
Ndị na-eto eto m, ọ bụ gị ka ọ dịịrị ịbụ Onye nche nke ụtụtụ bụ onye na-ekwupụta ọbịbịa nke anyanwụ bụ Onye ahụ bilitere Kraist! —PỌPỌ JOHN PAUL II, Ozi nke Nna di Nsọ nye ndi ntorobịa nke ụwa, XVII World Youth Day, n. 3; (Kp. Ndi 21: 11-12)
Ihe dị ka afọ anọ ka nke ahụ gasịrị, Mark nwere nnukwu agụụ maka ikpe ekpere n'ihu Sakrament Ngọzi. N’ebe ahụ, o nwere ahụmịhe dị egwu ebe Onye-nwe jiri aka ya kpọọ ya ka ọ kpọọ oku a ka ọ bụrụ “onye nche” (lee A Na-akpọ Mgbidi). Mark n'okpuru nlekọta nke onye nduzi ime mmụọ, Mark dere Isi okwu mmechi wee hiwe blog ya, Okwu dị ugbu a, nke na-aga n’ihu ruo taa ka ọ bụrụ “ìhè” nye mba nile n’oge ọjọọ a. Mark bụkwa a ukwe edemede na asaa albums nye aha ya, na ụtụ nye St. John Paul II,Abụ nke Karol. ” Mark na nwunye ya nwere ụmụ asatọ ma biri na Canada. Lee markmallett.com.
Youngmụaka egosila na ha bụ maka Rome na maka Churchka nye onyinye pụrụ iche nke mmụọ nke Chukwu… egbughi m oge ịrịọ ha ka ha họrọ oke okwukwe na ndụ ma gosi ha ọrụ dị egwu: ịbụ “ụtụtụ. ndị nche ”n'isi mmalite nke narị afọ iri ọhụrụ. —POPE ST. JỌN PAUL II, Novo Millenio Inuent, N.9
(na Nihil Obstat)
Amụrụ na London mana ibi na France kemgbe 1994, Peter Bannister bụ onye nyocha na mpaghara sayensị na okpukperechi, ọkachamara n'ịgba egwu, nke gụnyere ọnọdụ ya dị ka organist maka Taizé, na di na nna. O nwere asambodo nke nna-ukwu na Mahadum nke Cambridge (musicology) na Mahadum nke Wales (Nhazi usoro na Nkà Mmụta Ihe Ọmụma) ma bụrụkwa onye natara ọtụtụ onyinye mba na mba maka egwu na mmemme. Ruo ọtụtụ afọ, ọ bụ onye otu ndị otu nyocha nke Sayensị & Okpukpe nke Mahadum Lyon nke Katọlik na onye editọ nke saịtị mmụta asụsụ French, www.sciencesetreligions.com, nke ụlọ ọrụ Templeton World Charity Foundation kwadoro. Ọ bụ ndị ọkà mmụta banyere nkà mmụta okpukpe, nkà ihe ọmụma, na egwu ka ụlọ ọrụ Cambridge University Press, Ashgate na Routledge bipụtara; ọ bụ ya dere akwụkwọ OBUGHAL AKWHKWỌ AK :KỌ: Pope Francis na ndị na-achọghị ọdịmma onwe ha.
Gaa na webụsaịtị Daniel
Daniel O'Connor bụ prọfesọ nke nkà ihe ọmụma na okpukpe maka Mahadum State nke New York (SUNY) Community College. Na mbu injinia, Daniel gbanwere ọrụ wee gaa nara akara mmụta Master ya na Theology site na Holy Apostles College na Seminary na Cromwell, CT, ma bụrụ nwa akwụkwọ ugbu a, na-arụ ọrụ na PhD ya na nkà ihe ọmụma. Mgbe Daniel bụ onye mbụ bụ onye Katọlik, ọ na-eche na ọrụ ya kachasị na ndụ bụ ịkwalite mkpughe nke nzuzo: ọkachasị na ebere Chukwu dị ka Jizọs kpughere St. Luisa Piccarreta. Daniel na nwunye ya na ụmụ ya anọ bi na New York. Enwere ike ịchọta ebe nrụọrụ weebụ ya www.DSDOConnor.com. Ọ bụ onye edemede nke AKW OFKWỌ NSỌ SATANlations: Na mkpughe nke Jizọs nye Luisa Piccarreta na AKW OFKWỌ AKW CRKWỌ AKW CRKWỌ AK :KỌ: Ebube Ebube Na-abịanụ nke Udo Eluigwe na Ala.